Madax Dhaqameedka Awdal Oo Raaligelin Ka Bixiyay Hadal Ka Soo Yeedhay Guddoomiyaha UCID | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madax Dhaqameedka Awdal Oo Raaligelin Ka Bixiyay Hadal Ka Soo Yeedhay Guddoomiyaha UCID
Boorama (SDWO): Qaar ka mida madax dhaqameedka, waxgaradka iyo odayaasha gobolka Awdal ayaa raaligelin ka bixiyay hadalo ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga UCID oo la xidhiidhay in arday badan oo ka soo jeedda Puntland ay wax ka dhigtaan jaamacadda Camuud.
Waxaanay xubnahan salaadiinta iyo madax dhaqameedka ahaa sheegeen in ay aad uga xun yihiin hadalkii Faysal Cali Waraabe, isla markaana aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo waxbarashadda.
Sidaas darteed-na dadka ka soo jeedda Puntland ee jooga Boorama ama arday ha ahaadaan ama ganacsato in ay yihiin kuwo dhuloodii jooga, colaadda u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland-na aan loo beegsan Karin.
Xubnahaasi oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Boorama, waxay isku raaceen in ay aad uga xun yihiin hadalkii guddoomiyaha UCID uu ku magac dhabey in dad badan oo arday iyo ganacsato ahi ay Boorama degan yihiin, haddii Puntland ay dagaalka joojin waydana ay kuwaas beegsan doonaan.
Halkan Ka Daawo Shirka Jaraa’id Ee Madax Dhaqameedka Awdal: